Kuongorora uye maonero: Windows yakavhurika-sosi, chokwadi kana fungidziro? | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Free Software, Windows
Iyo network yakazadzwa nezvinyorwa zvinoparadzira runyerekupe nezve inogona kuvhurika-sosi Windowsndiko kuti, yakavhurwa sosi. Tichifunga nezvekushandurwa kwemaneja kuMicrosoft uye negwara nyowani riri kutorwa nekambani nekuvhura zvakawanda zvezvigadzirwa zvaimbove zvepamutemo, ikozvino zvinoita sekunge kune shungu huru kubva kune vakawanda kuti vaone Windows anoshanda system.
Aimbova mutungamiri uye mutsivi waBill Gates, Steve Ballmer akaramba zvachose mabhenefiti emahara kana akavhurwa sosi software. Zvino, mushure megore rechimakumi mana rekambani, zvinoita sekunge paine gakava remukati nezve kana zvingave zvakanaka kuvhura uye kutsikisa Windows kodhi. Uye zvese nekuda kwenzira nyowani yakatorwa nekambani mushure mekuuya kwaSatya Nadella.
Chokwadi ndechekuti zvakaonekwa kuti Microsoft ichapa sei Windows 10 (yaimbova Windows 9) mahara kune vashandisi vekambani inoshanda masisitimu mushanduro dzakapfuura, uye ichavhura ruoko rwako nemakopi epirati. Chimwe chinhu chisingafungidzirwe makore mashoma apfuura, apo kambani yakarwa zvine simba kurwisa piracy. Iyi gratuitousness ichawedzera huwandu hwemacomputer ane Windows 10, asi ini handifunge kuti ichaguma neMac OS X (zvakare yemahara, kunyangwe iwe uchifanira kubhadhara apple apple) uye Linux.
Maka Russinovich, anotungamira dhipatimendi rinomhanya Microsoft Azure, ndemumwe wevashandi vakuru vari kufarira kugadzira Mahara Windows. Asi achipesana nayo ane vatungamiriri vekambani uye kurambwa kwechinyakare kwesoftware yemahara iyo kambani yeMicrosoft yakave neyeyeki yeimba kwemakumi emakore.
Maonero angu ega:
Zvakanaka, kusvika parizvino izvo zvataurwa pane network. Zvino maonero angu akajeka. Handifunge kuti izvi zvinogoneka, kunze kwekunge munguva pfupi, sezvo Microsoft ichiwana chikuru graphical monetization kuWindows uye Hofisi, zvigadzirwa zvaro zviviri zvine mureza zvinogadzira yakawanda yemakambani purofiti. Uye Microsoft ikambani iyo munhoroondo yakafunga zvakanyanya nezve mari kupfuura vatengi vayo ...
Yo ndinofunga windows 10 chichava muyedzo ingave yemahara Windows ingave yakanaka kana kwete. Iine rezinesi remahara reWindows 10 inogadziridza, ichaonekwa kana ichikwezva vateereri vakawanda kana zvinopesana, haizokunde vateveri vatsva vakawandisa. Zvisinei, ini ndinofunga izvozvo Windows 10 haizove yemahara kune wese munhu, iwe uchafanirwa kubhadhara rezinesi remakomputa matsva uye kana iwe ukatenga iro usati wave uri mushandisi weMicrosoft kare kana ndiwo mafungiro angu kusvikira chimwe chinhu chasimbiswa ...
Con wana vateveri Handisi kureva chete kuti vashandisi vane Windows XP kana Vista kana 7 kana 8 sisitimu yekushandira vanoenda gumi, asi zvakare kukwezva vamwe vashandisi vemasisitimu anoshanda seMac OS X, GNU / Linux, FreeBSD, nezvimwe. Uye ini ndinoona izvo pachena zvakaoma nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Kune rimwe divi, Vashandisi veApple Ivo ma macadictos uye kunyangwe iwe ukavapa zvakadii ivo havangachinje maonero avo uye kunyangwe zvishoma maMacTaliban aripo mune mamwe materu enetiweki, achidzivirira zvigadzirwa zvemaapuro sekunge vanogamuchira mari kubva kukambani. Kune rimwe divi, Mac OS X ipuratifomu yakanaka kwazvo iyo ikozvino yasununguka uye kunyangwe isina kuvhurwa, unogona kugadzirisa iyo Darwin projekiti kodhi.
Kune rimwe divi, kune zvekare mafeni mukati iyo Linux nyika uye iyo FreeBSD nyika Iwe zvakare hausi kuzovatendisa ivo husiku humwe kana vachinzwa kugadzikana neplatform yavo. Uye zvakare, vazhinji vashandisi veLinux havangodi chete kuti ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi, kune zvimwe zvikonzero zvakawanda senge iyo yese iyo Unix nhaka inoita kuti ive inoshamisa.
Uye ini handifunge kuti Microsoft inotanga kubva pakutanga nekodhi uye inoita itsva Unix inoshanda sisitimu yekutsvaira pane ese iwo matambudziko eWindows NT iyo, kunyangwe yagadziriswa pamusoro peDOS, ichiri kukwana. Muchokwadi, ivo vaitove neiyo Unix inoshanda sisitimu, vaive nerezinesi rekuvandudza yavo Apple-yakanyoreswa * nix neMac OS X, asi ivo pakupedzisira vakaibvisa.
Ini ndinotaura nezvazvo Xenix, iyo yakazoendeswa kuCSC. Uye yakaita saizvozvo payakasaina chibvumirano neIBM kuvandudza iyo OS / 2 sisitimu inoshanda pamwe chete uye kubva kwayakakwevera kune Windows NT kernel. Iye aisakwanisa kuona kugona kweUnix uye kana anga asarudza kuenderera mberi nekuvandudzwa kweXenix yedesktop pachinzvimbo cheWindows NT, pamwe izvozvi aizove nevamwe vateveri vazhinji, kana zvirinani ndizvo zvandinofunga.
Uye kupedzisa, ndinofunga kuti kana ivo pakupedzisira vakasarudza kupa iyo yemahara software, inogona kunge isingapenga. vhura kodhi kodhi uye bvisa basa. Rega nditsanangure, kana Windows rezinesi iri yemahara, uye vasingatengese Hardware pamwe neApple, purofiti yeMicrosoft yaizonyura, nekuti havangapinde mari hombe yavakapinda kusvika zvino uyezve vanofanira kuramba kuisa mari mukugadzira zvigadzirwa zvavo.
Izvo hazvigoneke, asi kana iwe ukapa chigadzirwa chemahara ukachivhura, unobvisa mari mukusimudzira, nekuti unoisiya mumaoko enharaunda uye nenzira yekuzvipira, kunyangwe Microsoft pachayo ichiramba ichibatanidzwa uye kusimukira kune imwe nhanho chigadzirwa. Kana kuti pamwe tamba mativi ese, vhura chirongwa che base base inoshanda sisitimu kuti vamwe vagadzire kodhi zvakasununguka, vozobatanidza mamwe mazano mune yakavharwa mashandiro. vhuraWindows uye kune rimwe divi upe yakavharwa Windows.
Ikozvino, kufunga zvisina basa, zvingave zvinonyanya kubatsira kune vashandisi veamwe anoshanda masisitimu. Semuenzaniso, kana Microsoft ikafunga kuvhura kodhi yayo, izvo zvinobvumidza kunzwisiswa kuri nani kwesisitimu uye yaizounza mabhenefiti makuru emapurojekiti senge Waini, kana kutora zvikamu zvekodhi iwe zvaunoda kana matekinoroji ayo anofarira kuzviisa mune mamwe emahara anoshanda masystem, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kuongorora kweinofungidzirwa yakavhurika-sosi Windows
Fabian Guadalupe Fajardo Frausto akadaro
Chinyorwa ichi chakanyanya kunaka uye ndinofunga ndicho chinhu chekufunga nezvacho, ndinofunga kuti Linux ndiyo ichave yakanyanya kubatsirwa kana chiitiko ichi chikaitika
Pindura kuna Fabian Guadalupe Fajardo Frausto
Iva Marita akadaro
Ini ndinotenda mukugona kwekuti Microsoft inopa mukana kuvashandisi veWindows kukwidziridzira ku Windows 10 mahara, asi ndinoona zvisingaite kuti vape marezinesi.
Ndanga ndichishandisa Linux kwemakore uye kwandiri dambudziko harisi rezinesi (ini ndagara ndiine pirated windows), zvikonzero zvangu zvekuchinja zvaive zvekuita, kugadzikana, manejimendi manejimendi, mashandiro ... nezvimwe
Pindura Kuti Uve Malta
Javier Vives-Garcia akadaro
Ini ndinokahadzika chaizvo kuti windows anozopedzisira ahupa
Pindura Javier Vives Garcia
Dario Rodriguez Tenorio akadaro
Ini handisi mvumo pane iyi nyaya, kure nazvo, asi zvinoratidzika kwandiri kuti Microsoft iri kutaura nezve mukana wekuenda kuOpen Source, iyo isina kufanana neFree Software zvachose. Ngatifungei nezvazvo. Windows "Yakavhurika" yaizounza mvura kuchigayo chevanogadzira, zvese software uye Hardware, ichivabvumidza kupinda mukuitwa kwesystem, nokudaro vachideredza mutengo wekutsigirwa nehunyanzvi, pakati pezvimwe zvinobatsira. Zvese izvi pasina kuwana mahara Mahara Software uye pasina kurasikirwa nekudzora kwayo patent uye marezinesi.
Mamwe mabhenefiti ekuvhura iyo Windows kodhi angave, mumaonero angu:
- Iko mukana weinogadzira nharaunda kupa bug bug fixes.
- Kuongorora kwesisitimu kuti uone masuo ekumashure uye zvimwe fungidziro (Mushure meSnowden izvi zvakakosha).
- Kuvandudzwa kwetekinoroji yepasi papuratifomu kwaizokurumidzirwa.
Muchidimbu, kufamba uku, kana kukaitika, hakukuvadze zvimwe zvisikwa, asi mukufarira kubatanidzwa kweWindows senzvimbo yakanyanya kupararira.
Pindura Darío Rodríguez Tenorio
Ndinobvumirana newe. Pamwe modhi senge Red Hat kana Novell / SuSE isarudzo yeMicrosoft, ndiko kuti, yakavhurwa sosi software asi isina mahara.
Iniwo ndinobvumirana newe, izvozvi ndiri kutongwa seInsider yeW10 zvese desktop uye nhare. Zvingaite sezvakanaka kuti vatore Sisitimu seRed Hat, uye mazuva ano vanoti ivo vanenge vatove vachishanda pamahara emahara ane zita rezita "Redstone" Iyi ingangove kopi yeCanonical inokwidziridzwa inovaka system ... asi zvinoita sekunge kwandiri kufambira mberi kwekuti vashandisi veWindows uye chete vanokwanisa windows havanzwisise zvakanaka (kana ichi gadziridza nguva dzose sezvo paine akawanda windows munyika anofamba aine windows kugadzirisa akaremara)
Pindura kuna gabrielpbccp
julius linarez akadaro
Pindura kuna julio linarez
Daniel Muntaner akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo! Uye ndinobvumirana zvachose newe!
Mumakore angu makumi maviri nemasere saenzi wezvemakomputa, HAPANA… ZVESE… Ndakaona M $ achitora nhanho ndisingafunge nezvemubhadharo wake pamberi pechimwe chinhu. Saka kana win29 iri yemahara, zvinodaro nekuti isu hatione kuti M $ inobatanidzwa.
Pindura kuna Daniel Muntaner